Iimali eziziwayo zoLuntu kunye neeNkundla zeNkundla
Amacala kunye nabaPhathiswa bezoPalaphu okanye amaxhoba
Kwanesityebi kunye nodumo banokufumana inengxaki ngomthetho. Ukuba udumo eUnited States akukhuseli ekusukeni kwezobulungisa. Akunakukukhusela ukuba ube lixhoba lobugebengu.
La mabali anika umlinganiselo wophando lolwaphulaphulo kunye nezilingo zamatyala abandakanya abadumileyo. Ezinye zeemeko zivaliwe kwaye zigwetywe, ngelixa ezinye ziqhubeka.
Ukufa kukaMichael Jackson
NgoJuni 25, 2009, ngaphantsi kweenyanga ngaphambi kokuba kuqaliswe ukuqala iqela lamakhonsathi abuyele, ama-paramedics abizelwa kwikhaya eliqashisayo likaMichael Jackson eHolby Hills ngaseLos Angeles apho bamfumana engakwazi kwaye akaphenduli.
Uvavanyo lukaMichael Jackson
Umculi wasePapa uMichael Jackson wabhekene neentlobano zokuceba ukubethelwa kwabantwana, ukuvalelwa kwamanga kunye nokunyangwa, izinto ezintathu zokuzenza izenzo ezingcolileyo kumntwana, ukuzama ukwenza izenzo ezingcolileyo kumntwana, kunye neenkalo ezine zokulawula abasebenzisa izidakamizwa ukuba bancedise ekuthumeni i-felony .
Umthetho weSaga we-OJ Simpson
Ngomhla ka-Septemba 13, 2007, uSimpson namanye amadoda amane angena kwigumbi lehotele laseLas Vegas apho ezinye zeememorabilia zezemidlalo zenziwa ngokuthengiswa ngabaqokeleli ababini. Amapolisa ambophe u-OJ Simpson ngokuthumba kunye neentlawulo zokuphanga.
Icandelo likaRobert Blake
URobert Blake wabhekana novavanyo lokubulawa kukaBonny Lee Bakley kunye nokucela amanye amadoda amabini ukuba ambulale. UBabley, 44, wadutshulwa wafa ngoMeyi 4, 2001, njengoko wayehleli kwiView sports car emva kwevenkile yokudlela apho isibini esasidla khona.
I-Phil Spector Case
Umculi womculo wegwala kunye nomqulu we-musical Phil Spector uhlawuliswe ngokubulawa kobulali we-actress uLana Clarkston ngoFebruwari.
3, 2003, kwindlu yakhe yaseLos Angeles.
Ngo-Oktobha wama-24, 2008, imizimba ye-Academy Award-winning actress uJennifer Hudson nonina kunye no-mzalwana wafunyanwa kwindlu yentsapho yase-Chicago South Side. Ukushona kwabafileyo ngumama kaHarson, uDarnell Donerson, kunye nomntakwabo, uJason Hudson.
Iingxaki Zomthetho zikaJoe Francis
UJoe Francis, owenze izigidi ezivela kwiiVideos Girls 'Wild' iividiyo kunye namaphephancwadi, ufumene engxakini kwiinkathazo ezisemthethweni kwiinkqubo zomthetho kunye neenkundla zolwaphulo kumgangatho karhulumente nakwamanye amazwe.
Icandelo leKobe Bryant
Inkwenkwezi yebhola yebhola yebhola yebhola yebhola yeKhobe Bryant, oneminyaka engama-24 ubudala, uhlawuliswe ngelinye icala lokuhlaselwa ngokwesondo ngokumalunga nomfazi oneminyaka engama-19 ubudala kwi-spa ekhethekileyo apho wayehlala khona xa efika eColorado ngokuhlinzwa ngedolo ngohlobo lwe-2003.
Iingcebiso zokunceda iNqununu entsha yeSikolo iphunyelele uNyaka wokuqala
Yintoni 'Igosa langaphandle' eGoli?
Iifoto Zakho Zithini?
Iimfundiso malunga ne-Vaquita engozini
Tutorials kaKhan Academy